3 Ụzọ nyefee Voice Memos si iPhone ka Computer
Voice mail bụ nnọọ adaba mma, nke na-enye ohere ka anyị na-eziga e dere ozi anyị addressees dị nnọọ n'ime sekọnd ole na ole. Dị ka ọtụtụ prefers mfe ozi ederede, mgbe ụfọdụ, olu mail ọzọ bụ mma. Na-emekarị ndị dị otú ahụ ozi na-kama onye: ụbọchị ọmụmụ chọrọ, ekele wdg ka a pụta, ị na-achọ ka zọpụta ndị a na-echeta anyị kọmputa maka ọdịnihu ojiji. Na nke a dị mfe ndu m ga-akọwa otú nyefee iphone olu memo na kọmputa site na ozi ịntanetị na MMS na kwa nye ndụmọdụ a ole na ole bara uru software ị pụrụ ịhụ na-enye aka n'ihi nzube a.
Method 1. Nyefee iphone Voice Memos site Email / MMS
Gaa Voice Memos ngwa
Họrọ memo ị chọrọ izipụ.
Enweta na Share button
Ugbu a, i nwere ike ịhọrọ ma na-eziga gị memo site email ma ọ bụ ozi. Dị nnọọ soro ntuziaka na ihuenyo!
Method 2. Nyefee Voice Memos si iphone ka na kọmputa site na iTunes
Jikọọ gị iphone site USB-USB na-emeghe iTunes.
Họrọ gị iphone na isi menu.
Open Music ibe edokọbara ma nne Mmetụta a igbe ọzọ na-agụnye Voice Memos ọnọdụ.
Synchronise na music site na ịpị Mee bọtịnụ.
Gị memos ga-apụta na Music ndepụta! (ị nwere ike ịnweta n'ezie ọdịyo faịlụ nanị site nri-na ịpị memo)
Method 3. Top 3 iTunes Alternatives maka iphone Voice Memo Nyefee
Ahịa: $39.95 Size: 29.91M nyiwe: Mac Brief nnyocha: Na Wondershare TunesGo (Mac), ị nwere ike nyefee olu memos si iphone ka Mac na 3 mfe nzọụkwụ. E wezụga, ị nwere ike nyefee a dịgasị iche iche nke dị iche iche faịlụ formats si iphone na kọmputa na osote itughari.
Ị nwere ike ijikwa ọkacha mmasị gị music, fim, pọdkastị, olu memos, audiobooks na ọbụna karịa, niile na dị nnọọ ole na ole clicks! The software bụ dakọtara na iTunes, ma ike na-arụ ọrụ iche iche dị ka mma. Ke adianade do, TunesGo na-akpaghị aka tọghata faịlụ n'ime formats, dakọtara na Apple ngwaọrụ, ya ka ị ghara-enwe nchegbu banyere ahụ! TunesGo - zuru okè oke maka ijikwa data na-ebufe n'etiti gị ngwaọrụ!
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo on Mac Nzọụkwụ 2. Jikọọ iphone na Mac site eriri USB Nzọụkwụ 3. Nyefee iphone olu memo ka Mac
Ke akpan windows, pịa Voice memos na-ekpe na kọlụm na-ekpughe niile olu memos. Ego olu memos na ị chọrọ nyefee si iphone ka Mac na pịa "Export".
Ahịa: malite $34.99 Size: 10 MB nyiwe: Windows & Mac Brief nnyocha: iExplorer na-enye ohere ka mfe hazie gị olu memos, akụkụ na SMSs. Nanị mbupụ gị zọpụta ozi na kọmputa ma ọ bụ tọghata ha n'ime ọzọ kemfe formats: .pdf, .csv, .txt wdg Ọzọkwa, ị pụrụ nanị ndabere gị ederede akụkọ ihe mere eme na anya azụ na ya, mgbe ọ dị mkpa. Usoro ihe omume ana achi achi na ọ dịghị mma ga-efu mgbe ebufe olu memos, otú ọ dịghị mkpa ka nchegbu banyere nke ahụ. Ọ pụrụ ọbụna weghachi gị furu efu ozi na ụfọdụ. E wezụga ozi, iExplorer bụ a nnọọ irè data njikwa, nke na-enyere aka systematize gị data na ọtụtụ adaba n'ụzọ.
Ahịa: $ 19.95 (free version-dịnụ) Size: 30,3 MB nyiwe: Windows Brief nnyocha: ọzọ software maka data management na-ebufe faịlụ n'etiti iphone na gị PC. Na-achọ iTunes na-arụnyere na kọmputa gị. Voice memos ike ngwa ngwa bufee na dị nnọọ ole na ole dị mfe kensinammuo nzọụkwụ. Ihe ọzọ bụ na, ọ bụghị naanị olu memos nwere ike zigara, SynciOS na-enyekwara ịzọpụta ndị ọzọ multimedia faịlụ, ngwa, photos na ndị ọzọ. IOS audio / video Ntụgharị a na-gụnyere anyị mma. Ụgwọ mbipute adịghị ihe ọ bụla manụ mgbasa ozi tụnyere ka free otu.
Full Nduzi na Mirroring Your Android Gị PC / Mac
MKVtoolnix maka Mac: An Easy-edezi Ngwa maka All Mac Ọrụ
> Resource> Mac> Olee otú iji Detuo Voice Memos si iPhone ka Mac